अक्सिजन नहुँदा अस्पतालमा संक्रमित छटपटाउँदै, के गर्दैछ लुम्बिनी प्रदेश सरकार? – Health Post Nepal
२०७८ जेठ १ गते १३:४९
मंगलबार मध्यराति १२ बजे, रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा छटपटाउँदै, यताउता गर्दै थिए भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका कर्मचारी ।
अस्पतालमा दुई सय २० जना बिरामीले दुई घन्टापछि अक्सिजन नपाउने अवस्था आएपछि उनीहरु प्रशासनमा आएका थिए । रुपन्देहीका अक्सिजन उद्योगबााट अक्सिजन भर्न नपाएपछि अक्सिजन लिन चितवन पुगेको गाडीलाई चितवन प्रशासनले रोकिदिएपछि पहल गरिदिन भन्दै उनिहरु त्यहाँ पुगेका थिए ।
‘रुपन्देही प्रशासनले कोटा तोकिदिएको छ, त्यही पनि आपूर्ति छैन । त्यसैले हामीले गाडी चितवन पठाएका थियौँ । तर, त्यहाँका सिडिओले बाहिर जिल्ला दिन मिल्दैन भनेर गाडी रोकिदिनुभयो । त्यसैले हाम्रा सिडिओलाई गुहार माग्न आएका हौँ,’ अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले भने ।
बुधबार बुटवलको कोरोना अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएका ५ जनाको ज्यान गयो। उनीहरु अक्सिजनको सहयोगमा उपचार लिइहेका थिए। आधा घण्टासम्म अक्सिजन आपूर्ति बन्द भएपछि ति बिरामीको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. बिष्णु गौतम बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशभरमा बुधबार मात्रै १४ जनाको ज्यान यही कारणले गयो। बुधबारैथप ६ जना कोरोना संक्रमित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा बिते। उनीहरु उपचारका लागि आईसीयु र एचडीयू बेडको पालो पर्खेर बसेका थिए।
बुधबार नै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ।
अर्थ, पहुँच र बलले सक्नेहरुका घर घरमा भोलि चाहिएला नि भनेर “ब्याक अप“ को लागि सिलिन्डर थन्किएपछि र सामान्य अवस्थाका मान्छेलाई भनेर आइसोलेशनमा बसेकालाई सिलिन्डर पुर्याइदिने गाउँ पालिका÷नगरपालिकाको अभियानले पनि अस्पतालका आइ सी यू र एच डी यू मा अक्सिजनको अभाव भएको छ। अक्सिजनको बारेमा सबै बिज्ञ भएपछि के लाग्छ र ?
डा. खनालले अक्सिजन नभएर अस्पतालको उपचारमा अति नै समस्या आएपछि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो गुनासो गरेको बताए।
माथिका तीन वटा घटनालाई हेर्दा रुपन्देहीका अस्पतालहरुमा अक्सिजन नभएकाले कोरोना संक्रमितको उपचारमा परेको असरको आंकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । तर यो अवस्थामा पनि अक्सिजन निरन्तर आपूर्ति गराउन सरकारी सयन्त्रले अहिलेसम्म देखिने गरी काम गरेको देखिदैन।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले अक्सिजनको माग, उत्पादन र वितरणमा तालमेल नमिल्दा अक्सिजन अभाव भएको बताउँछन्। उनले समय समयमा अघोषित रुपमा विद्युत लोड सेडिङ भएकाले पनि अक्सिजनको उत्पादनमा थप जटिलता देखिएको बताए। त्यसैगरी घरघरमा अक्सिजन राखेकाले बजारमा सिलिण्डर अभाव देखिएको पनि उनको भनाई छ ।
उनले कुल संक्रमितको कम्तिमा १५ प्रतिशतलाई उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यो प्रदेशमा अहिले पनि १९ हजार ४ सय ९४ जना संक्रिय संक्रमित छन् ।
किन भयो त अक्सिजन अभाव ?
अभाव हुनुका धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा कमी हुनका केही कारणहरु यस्ता देखिएका छन् ।
घटनापछि मात्रै योजना
बैशाख १३ गते लुम्बिनी प्रदेस सरकारले बुटवल, नेपालगंज, दाङ र भैरहवामा अक्सिजन बेड बनाउन त्यहाँ रहेका कोभिड अस्पतालहरुलाई १ करोड ७५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो।
कोभिड १९ का बिरामी बढ्न गई अस्पतालमा बेडको अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले अक्सिजन सहितको बेड बनाउन पहल गरेको प्रदेश सरकारले बताएको थियो । तर बिरामीका लागि कति अक्सिजन चाहिने हो ? बेडमा अक्सिजन कसरी र कहाँबाट उपलब्ध गराउने हो ? भन्ने तयारी भने प्रदेश सरकारले गरेको देखिएन। न त त्यसको तयारी के भइरहेको छ भनेर सोधी खोजी नै गर्यो।
अर्कोतिर अक्सिजन नभएकाले संक्रमितको उपचार हुन नसकेको विषयमा लगातार समाचार प्रकाशित भएपछि मात्रै रुपन्देहीमा बुधबार अबेर सेनाको हेलिकप्टरबाट ४१ सिलिण्डर अक्सिजन झारियो ।
ती अक्सिजन सिलिण्डर भैरहवाको भीम अस्पताल र लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइ भरथेग गरिएको छ। रुपन्देहीका प्रजिअ अस्मान तामाङका अनुसार रुपन्देहीको उत्पादनले धान्न नसकेपछि तत्काल समस्या समाधान गर्न अक्सिजन सिलिण्डर ल्याइएको हो।
बैशाख २३ गते बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले अक्सिजन सक्किने अवस्था आएपछि हारगुहार गरेको थियो। अस्पतालमा केही घण्टाका लागि मात्र पुग्ने अक्सिजन रहेको र अक्सिजन आइनपुगे उपचार सेवा प्रभावित हुने अस्पताल प्रशासनले जनाएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसदिनलाई मात्रै अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिएको थियो।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले २२ गते नै अक्सिजनका लागि पहल गरिदिन रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाईसमेत अनुरोध गरेका थिए। तर स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको देखिएन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार मात्रै घर, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा अन्य स्थानमा राखिएका अक्सिजनका सिलिण्डर अस्पतालमा बुझाउन अनुरोध ग¥यो। त्यो पनि अक्सिजन नपाएर संक्रमितको ज्यान गएपछि ।
घर घर र पालिका पालिकामा अक्सिजन
कोरोना संक्रमितहरु आफनै घरमा पनि बसिरहेका छन्। विभिन्न पालिकाहरुले घरघरमै अक्सिजन पुर्याउने अभियान चलाउनुका साथै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन चलाएका छन्। यसले एकातिर नागरिकलाई सहज भएपनि अर्कोतिर अस्पतालमा रहेर उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि भने अक्सिजन अभाव भएको छ ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनाल भन्छन्, घरघरमा अक्सिजन सिलिण्डर नराखौँ, पहिले अस्पतालमा अप्ठ्यारोमा परी उपचारमा रहेकालाई बचाउन अक्सिजन सिलिण्डर अस्पताल पुर्याउ।’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले पनि घर घरमा भोली चाहिएला कि भनेर सिलिन्डर राख्दा र पालिकाहरुले सिलिण्डर अभियान चलाउँदा अस्पतालका आइ सी यू र एच डी यू लाई अभाव भएको बताउँछन्।
उनले अक्सिजन प्रयोग गर्ने तरिका नजान्दा घरमा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीका लागि बढी अक्सिजन खर्च भएको हुनसक्ने बताए।
अक्सिजन उद्योगको क्षमता भन्दा बढी चाप
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका अक्सिजन उद्योगबाट दैनिक करिब २ हजार ठूलो सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १ हजार ४ सय ८० अक्सिजन सिलिण्डर अपुग हुने देखिएको प्रवक्ता पौडेले बताए ।
उनले कोरोना महामारीपछि एक सय प्रतिशत भन्दा बढी माग बृद्धि भएको हुदा उद्योगहरुले अक्सिजन पुर्याउन नसकेको बताए । अक्सिजनको माग बढेपछि केही दिन अघि मात्रै दाङको अक्सिजन उद्योग ६ बर्षपछि संचालन गरिएको थियो ।
महामारीमा राजनैतिक खिचातानी
कोरोना महामारीको पहिलो लहरको लक डाउन अघि नै स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न तयारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार यस पटक भने चुपचाप जस्तै छ।
गत बर्ष प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार बनाउने, स्थानीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराउने, जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशिल गराउनेदेखि किसानलाई ढुवानी र उत्पादनमा सघाउने खालका कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
तर अहिले भने प्रदेश सभामा रहेका दलहरु सत्ताको खेलमाअल्झिए। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तामा रहेको दलका साथै प्रतिपक्षमा रहेको दलले बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। बैशाख १६ गते लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा निषेधाज्ञा दिइयो।
सँगसँगै प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारभित्रै मन्त्रिमण्डलमा रहेका दलहरु एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे । प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस, जनता समाजवादी पाटी र राष्ट्यि जनमोर्चा पनि सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमा लागे।
महामारीमा देखिएनन् दल र नागरिक समाज ?
सरकारले कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अनुरोध गरे पनि मापदण्ड उल्लखंघन गरेर राजनैतिक र सामाजिक कार्यक्रम भइरहे । अहिलेको महामारीका बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यसरी प्रतिक्रिया दिनेमा राजनैतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुको संख्या पनि कम छैन ।
तर त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा देखिने दल र समाजका प्रतिनिधीहरु महामारी रोक्ने काममा भने खटिएकाछैनन् । यसले पनि कोरोना महामारीको उपचार र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन समस्या परेको बताउँछन् बुटवलका स्थानीय हरिप्रसाद अर्याल। उनले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तर महामारीको समयमा साझा धारणा नबनाई सामाजिक सञ्जालमा सुझाव सल्लाह दिनुको अर्थ नहुने बताए।
महामारीको समयमा सरकारको मात्रै मुख ताक्न नहुने उनको भनाई छ । महामारीमा साथ दिने हाम्रो पनि दायित्व हो बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्यालले भने, सरकारको मुख ताकेर मात्रै महामारीको पार लाग्दैन।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. खनाल पनि महामारीसँग जुध्नका लागि नागरिक सयन्त्र हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले सरकार र अस्पतालको मात्रै मुख ताक्दा सानातिना समस्यामा आफुहरु अल्झिनुपरेको बताए ।
महामारीमा खटिएका स्वास्थ्कर्मीलाई हौसला दिदै काममा ठिक समयमा ठिक तरिकाले खटाउने समयमा बेड थप्नुपर्ने, अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सामग्री अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था छ, यसले काम गर्ने ‘स्पीड’ मा ‘ब्रेक’ लाग्ने गरेको छ।
भारतमा केही पहिलेदेखि कोरानाले जस्तो विध्वंश मच्चाएको थियो त्यस्तै विध्वंश नेपालमा मच्चिन्छ भन्ने निश्चित थियो । त्यसलाई रोक्न सक्ने एउटै मात्र प्रभावकारी उपाय थियो संक्रमण फैलन नदिनु । त्यसका लागि आवश्यक सजगता अपनाउन नागरिक समाज असफल भयो ।
के तयारी गर्दैछ त लुम्बिनी प्रदेश सरकार ?
प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडलका अनुसार, अक्सिजन आपुर्तिका लागि प्रदेश सरकारले तीन वटा विकल्प अगाडी बढाएको छ। पहिलो, भारतबाट लिक्वूड अक्सिजन ट्यांक ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।
दोस्रो पर्सा, विराटनगरतर्फबाट अक्सिजन सिलिण्डर ढुवानी गर्न थालिएको छ । तेस्रो, नयाँ अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न समय लाग्ने हुँदा अस्पतालमा बिग्रीएर रहेका अक्सिजन प्लान्टलाई तिनलाई चलाउने काम गर्न लागिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
तर यी काम सजिलो भन्ने बित्तिकै हुने र कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन। ती काम भएर अक्सिजनको आपूर्ति भइञ्जेलमा कतिले ज्यान गुमाइसकेका हुने हुन् ? त्रासपूर्ण प्रश्न खडा छ।